မောင်စေတနာ: ၀က်ဆိုက်က စာသားတွေနဲ့ ပုံတွေကို PDF ဖိုင်နဲ့ ယူချင်လား
၀က်ဆိုက်က စာသားတွေနဲ့ ပုံတွေကို PDF ဖိုင်နဲ့ ယူချင်လား
ဒီရက်ပိုင်းမှာ အလုပ်မအားတဲ့အတွက် အွန်လိုင်းမ၀င်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ စိတ်ကတော့ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လဲပဲ မိမိရဲ့ ဘလော့ဟာ လူသိမများသလို၊ လူလဲ မကြည့်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို ခံစားမိပါတယ်။ မိမိကသာ ရေးနေရတယ်။ ဖော်ပြနေရတယ် ကြည့်သူမရှိ၊ သိသူမရှိ ဖြစ်နေတော့ အလကားဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ သို့သော်လဲပဲ ကိုယ့်က ရေးချင်နေတာကိုး သိစေချင် နေတာကိုး၊ ဒါကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ အားသောအချိန် လေးများမှာ ဆက်လက်ရေးသား နေပါတယ်။
မဟုတ်တာတွေ ပြောတာ ရှည်သွားပြီ။ အခုဖော်ပြချင်တာကတော့ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Website တွေက စာတွေ ပုံတွေကို PDF ဖိုင်အနေနဲ့ ယူချင်တယ်၊ သိမ်းထားချင်တယ် ဆိုရင် အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကို Install လုပ်ပြီး မိမိကြည့်နေတဲ့ ၀က်ဆိုက်မှာ Menu Bar ထဲက File ထဲက Print ကို နှိပ်ပြီး CuteWriter ဆိုတဲ့ Printer လေးကို ရွေးပြီး လုပ်ရုံပါပဲ။ ဆော့ဝဲလ်ကို ဒီတွင် Click လုပ်၍ ယူပါ။
8 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
မောင်စေတနာရေ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ဗျာ။ ဖတ်မဲ့သူတွေ အလိုလို ရောက်လာမှာပါ။
ရေးဖို့ ကသာ အဓိကပါဗျာ။
11:36 PM, August 20, 2008
မောင်စေတနာ ဆီကို အလည် ရောက်ပါတယ်ဗျာ။
နာမယ် နဲ့လိုက်တဲ့ စေတနာထားတာတွေ အတွက်
6:56 PM, August 23, 2008
PDF ဆော့ဝဲလ်ကို 64 bit Operating System မှာ သုံး၍ရအောင် ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီစေလိုပါသည်။
32 bit မှာတော့ အဆင်ပြေပါသည်။
11:42 PM, October 03, 2008
i always see ur site for my convinience, never write for comment .I like to say is thanks for all ur post,it's very precious for me and also i share to all my friends ..
9:16 AM, January 21, 2009
comment မရေးဖြစ်တာပါ ကိုစေတနာရေ
သိရသလောက်တော့ တော်တော်များများ ဒီဆိုဒ်လေးကို အားပေးနေပါတယ်
စေတနာအသီးအပွင့်လေးတွေ ပွင့်ဖူးနေတာ မသိမမြင်ရပေမဲ့ ကြည်နူးစရာပါလေ
1:16 PM, May 08, 2009
????????????????? ???????????????????????????????? ????????????? ???????? ???????????????? ?????????????? ????????????????????? ????????? ????????????????????????? ????????? ??????????????????? ????????????? ????????????????????????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????????????????????? ???? ????? ??????????????? ????????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ???? ??????????? ???????????????????????????? ???? ??????????????? pdf ???????????? ???????? ?????????????? ???????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ????????????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????
10:52 AM, August 30, 2010
64 bit အတွက် လိုချင်တယ် ကျတော့်လက်တော့ i3 64 bit အခု ဒေါင်းတာ မရဘူးဖြစ်နေလို့ ကူညီပါအုံး
8:53 PM, October 30, 2010
စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အကို ကျန်တော်တို့က Comment မရေးဖြစ်တာ အကို ဝက်ဆိုက် ပဲကြိုက်လူကြိုက်များတာပါ ကျန်တော်အပါဝင်ပေါ့ သိချသ်တာလဲသိရတယ် မတက်တာလဲတက်သွားတယ် အကို့ဝက်ဆိုက်လေးက ကျန်တော့်အတွက်ဆရာဆိုလဲမမှားပါဘူး အမြဲအားပေးနေပါတယ်
6:04 PM, April 03, 2015